ETH / USD ၏နာရီနာရီဇယားတွင် (Kraken မှတစ်ဆင့်သတင်းပို့ခြင်း) ခုခံကာကွယ်မှုနှင့်အတူဒေါ်လာ ၁၂၉ နီးပါးကျဆင်းနေသည့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းရှိသည်။
In the past three sessions, Ethereum faced an increase in selling pressure below $375. ETH price broke the $ 370 ထောက်ခံမှုဇုန် and it even settled below the 100 hourly simple moving average.
Ethereum စျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၂၃၀ အောက်သာရှိသည်။ ရင်းမြစ် - TradingView.com
A successful close above the $370 resistance might validate the double bottom pattern. In the stated case, the price is likely to continue higher towards the $390 and $ 400 ခုခံ levels in the near term.
အလုပ်ချိန်နာရီ MACD - ETH / USD အတွက် MACD သည်တွန်းအားဇုန်တွင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့လျားနေသည်။
အလုပ်ချိန်နာရီ RSI - ETH / USD အတွက် RSI သည်လက်ရှိအဆင့် ၃၀ အထက်သာရှိသည်။
Tags: အောကျခွေ, နှစ်ချက်, ထွက်ပေါ်လာ, Ethereum, ပုံစံ, ပြိုင်ပွဲ, သိသိသာသာ
စံချိန်တင် $ 113M BUSD stablecoin စီးဝင်မှု Binance DeFi နှင့်ပတ်သက်။ အလေးအနက်ကြောင်းပြသထားတယ်